AmaPedi abe isigxile phezu kwendawo eningi ehambisana neRimpopo, iVaal kanye neKomati, amandla abo okukhulunywa ngawo njengamanje okuthiwa yiSekhukhuneland, enhliziyweni yawo phakathi kwemifula ye-Olifants ne-Steelpoort. Nakuba amaqembu angaphansi abonakala ejabulela ukuzimela, ukulawulwa komphakathi kugcinwe igunya lePedi. Okubaluleke kakhulu ukuthi iPedi iphikelela ukuthi izinduna eziphansi zithatha abafazi babo abayinhloko embusweni olawulayo.
Kulezi zizukulwane, lokhu kwavela ohlelweni lapho indodana kanye nendlalifa yezinduna zezihloko zaphoqelelwa ukuba zishade nomzala, futhi zenzele imali yokukhokhela umhlalaphansi eMaroteng ngaleli lungelo.
Abaphathi bePedi kanye nezikhulu baboshelwe ebuhlotsheni bokungalingani. Ngaphandle kwe-bridewealth, izikhulu ezincane kulindeleke ukuba zikhokhise ngokuyinhloko nangezinye izindlela, futhi zihlale zikwaziswa kuzo zonke izenzakalo ezibalulekile, njengokusungulwa kwezikhala zokuqala.
Ngokwalokho, inkantolo yenkosi enkulu kakhulu yesikhalazo kubantu abaphansi kodwa, ngokusemandleni, igunya layo lalivame ukuvinjelwa ezindabeni zezombusazwe, njengokungathi ubudlelwane phakathi kwamaqembu, izingxabano zomngcele kanye nokulandelana kokubusa. Ukukhulumisana phakathi kwenkosi enkulu kanye nezinhloko ezincane kwenziwa ngesistimu yabaqondisi (batseta).